दाँतलाई कसरी बलियो र चम्किलो बनाउने ? -
दाँत शरीरको यस्तो हिस्सा हो, जो स्वास्थ्य र सौन्दर्यसँग अभिन्न रुपले जोडिन्छ । जस्तो कि, शरीरमा प्रवेश गर्ने कुनैपनि खानेकुरालाई पचाउनका लागि दाँतको खास भूमिका रहन्छ । चिकित्सकहरु भन्छन् नि, ‘खानेकुरा एकदमै राम्ररी चपाएर खानुपर्छ ।’ जति मिहिन ढंगले चपाउन सकिन्छ, त्यती नै पाचन यन्त्रका लागि सहज हुन्छ । अतः यसका लागि दाँत बलियो र सफा हुनैपर्छ । दाँत बलियो भएमा समग्र पेट वा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।
यति महत्वपूर्ण दाँतलाई कसरी बलियो, सफा र आकर्षक राख्ने त ?
अर्को कुरा हामीले ब्रस गर्न सानैबाट सिकेका हुन्छौं तर, आश्चर्यजनक कुरा धेरैजसो मानिसहरुले अझै पनि सहि ढंगले ब्रस गर्न जान्दैनन् ।
भारतबाट ८ सय १९ नेपाली भित्रिए, १४ सय ८३ भारतीय फर्किए
३१ असार २०७८, बिहीबार १८:१२ July 15, 2021 Kanchanpur Khabar
११ चैत्र २०७६, मंगलवार ०८:२७ March 24, 2020 Kanchanpur Khabar
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १३:४४ September 14, 2021 Kanchanpur Khabar